Fampiroboroboana "miverina an-tsekoly" an'i Apple miaraka amin'ny AirPods | Avy amin'ny mac aho
Ny fiverenan'ny Apple any an-tsekoly dia mihetsika ankehitriny any Etazonia sy Kanada. Nasaina ora vitsy lasa izay ary manan-kery ho an'ny ekipa mpampianatra, mpianatra, ray aman-dreny mpianatra ary na iza na iza manaporofo fa mianatra. Amin'ity tranga ity, toy ny nitranga tamin'ny tranga teo aloha, ny orinasa Cupertino dia manampy fihenam-bidy hatramin'ny 20% amin'ny fandraisana AppleCare + ho fanampin'ny safidy tonga fanomezana, AirPod sasany miaraka amin'ny fividianana iPad na Mac.
Afaka miteny izany isika ny fampiroboroboana amin'ity taona ity dia mitovy amin'ilay natombok'izy ireo tamin'ny taon-dasa. Ny tolotra miaraka amin'ny AirPods maimaim-poana dia misy manomboka izao raha hividy MacBook Air, MacBook Pro, iMac 24-inch vaovao, Mac Pro, Mac mini ary mazava ho azy miaraka amin'ny iPad Air sy iPad Pro vaovao miaraka amin'ny processeur vaovao M1.
Ao amin'ny fizotry ny fividianana ireo mpampiasa izay maniry mahazo AirPods misy boaty famerana tsy misy tariby Izy ireo dia afaka manampy 40 dolara fanampiny amin'ny totaliny ary ity ary dia novaina. Ankoatr'ity fampiroboroboana ity manan-kery ihany koa ho an'ny AirPods Pro ary tsy mila manampy $ 90 fotsiny izy ireo amin'ny fotoana ividianana. Hiankina amin'ny tsirairay izany fa mazava ho azy fa tsara ny fampiroboroboana raha jerena ny vidin'ireto AirPods ireto.
Mbola tadidintsika ireo andro ireo rehefa nangataka tamin'i Apple izahay mba hanome AirPod sasany hividianana Mac na iPad ho an'ny fividianana mifandraika amin'ny oniversite, farany nanao izany ny orinasa Cupertino ary efa niaraka taminy roa taona misesy. Tsy ho ela dia ho tonga eto amintsika izany, ka ireo rehetra izay mieritreritra ny hividy Mac na iPad dia amporisihinay ianao hiandry aorian'ny fahavaratra raha tsy maika aho mazava ho azy ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Fampiroboroboana "back to school" an'i Apple miaraka amin'ny AirPods maimaim-poana
macOS Monterey dia mamela ny AirPlay ao amin'ny Apple Fitness +
Manenina ve ianao amin'ny fametrahana ny macOS 12 beta? Azonao atao ny miverina amin'ny macOS Big Sur